Akụkọ - Nri ole na ole dabara adaba maka nkịta
Maka nkịta nwere anyaukwu, na mgbakwunye na inye nri nkịta kwa ụbọchị, onye nwe ya ga -enyekwa nkịta nri mgbakwunye nri n'otu oge, mana ọ nwekwara ike dozie agụụ. Taa Xiaobian ga -ewebata gị, dabara adaba maka nkịta iri “nri” ole na ole, ụtọ adịghị ọnụ!
Ọ bụrụ na nkịta gị abụghị onye ekweghị ekwe lactose, chiiz bụ nnukwu nhọrọ nri n'ihi na ọ nwere nnukwu protein, calcium, ọkụ na -atọ ụtọ, dịkwa mfe mgbari. Nri dị ka cheese feta dị elu na calcium. Ị nwere ike inye nkịta gị calcium, mana erila oke.
Ọkụkọ kpọrọ nkụ
Anụ bụ ihe nkịta na -amasị iri. Ọkụkọ na ọbọgwụ kpọrọ nkụ bụ ezigbo nri nri. Nri anụ bụ ụfọdụ anụ a mịrị amị ma ọ bụ soseji, nke na -ata ata ma na -enwekarị mmasị iri nri. A na -atụ aro ka ọ "rie anụ ọkụkọ na -adịghị abụba", nke dị obere abụba ma nwee ike nyere aka hichaa ọnụ nkịta.
Kuki nkịta abụghị naanị ụzọ iji mee ka agụụ nke nkịta belata, ha na -ejekwa ozi dị ka ọzụzụ ma bụrụ ezigbo nhọrọ nri maka nkịta. Na eriri dị na kuki nwere ike inye aka kpochapụ ume ọjọọ ma nyere aka na mgbaze, na -ebelata ohere stool na -esi ísì.
Ọ bụrụ na nkịta chọrọ ibelata isi na afọ ntachi, ọ kacha mma ịkwalite nri ha. Ọ kacha mma ịhọrọ nri nkịta dị mfe ịmịkọrọ. Nri nwere yucca ntụ ntụ nwere ike melite nnabata eriri afọ ma melite isi oche.
Dịka ọmụmaatụ, “Ole Dog Snack” na -anabata usoro ihicha, na -ejigide ụtọ nke ihe nri, anaghị ete mmanụ ma ọ naghị ekpo ọkụ. Iri ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'oge nkịtị na ịgbakwunye probiotics na -enyere aka melite ọrụ nsia nke nkịta.
Mmechi: Kedu ihe nkịta kacha amasị nkịta gị?
Oge ezipụ: Aug-11-2011